Ukunikezelwa: Ukwazisa ukuSebenza kweeNjini zoKhangelo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 21, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Ukuphuculwa kwam kokuqala kwavela kwiintsuku zokuqala ze-SEOmoz ngokulula kumxholo wasimahla kwindawo yabo. Njengoko yethu arhente entsha yeendaba ikhulile kwaye i-SEO ibaluleke kakhulu… kwaye ibalulekile kwisicwangciso-qhinga sentlalo… ixesha lam endilichithe kwi-SEOmoz nokuthetha namalungu liyanda.
Oku yi intshayelelo emnandi yokusebenza kweinjini yokukhangela uMoz ubuyisele umva xa besenza i-SEOMoz. Inika ukuqonda okucacileyo malunga nokuba iinjini zokukhangela zisebenza njani kunye nokuba ulwazi lwakho luqokelelwa njani, luhlelwe njani kwaye lubekwa njani.
tags: Intro kwi seoenjini yokukhangela nouniziseko zokoOko kuqalaseomoz